Paswọdu chebe ngwa gị na AppLocker | Esi m mac
Paswọdu chebe ngwa gị na AppLocker
O yikarịrị ka ọ bụrụ na ị nwere naanị otu Mac n'ụlọ gị, ezinụlọ dum na-eji ya site na akaụntụ ndị ọrụ dị iche iche, mana ọ bụrụ na anyị nwere obere nwatakịrị ọ ga-abụ na n'oge ahụ anyị ahọrọghị ịmepụta akaụntụ njirimara onye ọrụ maka ha ya mere ọ ga-eji nke anyị lee vidiyo na YouTube ma ọ bụ nwee egwuregwu ndị ọzọ anyị tinyere. Nsogbu na-abịa mgbe ike gwụrụ gị ma malite ịgba ọsọ na-enweghị rhyme ma ọ bụ ihe kpatara ya, yabụ ọnụọgụgụ oge ị nwere ike ịkpọ anyị nwere ike ibido iwe iwe. niile ma ọ bụrụ na echiche ịhapụ ya Mac bụ ka anyị zuo ike.
Ọ dabara nke ọma na Mac App Store anyị na-achọta ngwa AppLocker, ngwa nke na-enye anyị ohere igbochi ngwa niile ma ọ bụ ọrụ sistemụ site na iji paswọọdụ nnabata, yabụ na ọ bụrụ na onye ọrụ ọ bụla pịa ya na mberede, igbe nke ngwa ahụ ga-apụta na-arịọ anyị maka paswọọdụ iji nwee ike ịnweta ma gbaa ya. Ọrụ nke ngwa ahụ dị mfe, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-agba ọsọ ya maka oge izizi, tinye paswọọdụ nnabata ma tinye ngwa ndị anyị chọrọ igbochi site na ndepụta.
Ngwa a dịkwa mma ma ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ na ọfịs na anyị achọghị ka onye ọrụ ọ bụla ọzọ nwee ike ịnweta ya site na igbochi mmebi nke ngwa ahụ nke na-enye ya ohere ile ya ma ọ bụ dezie ya. AppLocker dị maka nbudata na nbudata na ngwa nke na-enye anyị ohere ịmeghe ọrụ niile. AppLocker dị na Bekee, ọ karịrị 6MB nha, ma chọọ macOS 10.11 ma ọ bụ mesịa gbakwunye ihe nhazi 64-bit.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ọrụ na nchekwa nke ngwa a na-enye anyị, naanị ị ga-pịa njikọ m ga-ahapụrụ gị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Paswọdu chebe ngwa gị na AppLocker
Versiondị a na - ahapụ gị igbochi otu ngwa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime karịa otu, ị ga-eji igbe dị with 10,99 gafere. Gini mere ịji kwuo ya n'isiokwu ahụ ma anyị zere igbu oge?.
Ikwesịrị ịrụ ọrụ na ndetu ndị ọzọ
Nwa amaala Juca dijo
Ngwa ọ bụla yiri ya maka iPad?
Zaghachi Citizen Juca
Kporie Apple sistemụ 6 yana sistemụ asaa na Mac gị
Podcast 8 × 36: Otu izu ka WWDC 2017